थाइराइडका बिरामीलाई खानेकुरामा भ्रम :: Setopati
थाइराइडका बिरामीलाई खानेकुरामा भ्रम
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कात्तिक २३
वर्तमान समयमा अधिकांश मानिस सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगबाट ग्रसित छन्। अहिले नसर्ने रोगमध्ये धरैजसोले भोगिरहेको रोग थाइराइड पनि एक हो।
कतिपय थाइराइडका बिरामी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा नै अन्यौलमा छन्। यतिमात्रै नभएर थाइराइडका बिरामीलाई विशेषगरी खानेकुरामा भ्रम छ। थाइराइडका बिरामीले यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन भन्ने भ्रम रहेको मधुमेह तथा थाइरोइड विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्र कार्की बताउँछन्।
‘थाइराइडका बिरामीले सबै कुरा खानुहुन्छ, केही बार्नु पर्दै, जुनसुकै खानेकुरालाई पनि सन्तुलन मिलाएर खाएमा थाइराइडका बिरामीलाई कुनै असर पर्दैन,’ डा.कार्कीले भने।
थाइराइड के हो र यो कहाँ हुन्छ?
यो पुतली आकारको ग्रन्थी हो, जुन घाँटीको अगाडि भागमा रहेको हुन्छ। यसको काम भनेको हर्मोन निकाल्नु हो। हर्मोन हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुने एक तत्व, जो रगतबाट प्रवाहित हुन्छ र अंग र कोषहरूको कार्यमा मद्दत गर्छ। जसले गर्दा शरीरले विभिन्न कार्य उत्पादन गर्छ।
थाइराइड हर्मोनको कार्यहरू
थाइराइड हर्मोनको काम शरीरको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्नु रहेको डा.कार्कीले बताए। यससँगै शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्नु र विभिन्न अंगको कार्यमा मद्दत गर्नु हो।
थाइराइडका समस्या दुई किसिमका
डा. कार्कीकाअनुसार थाइराइडको समस्या दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा ‘हाइपो भाइराडिज्म’ (थाइरोइड हम्रोनको कमी): यस्तो अवस्थामा ग्रन्थीले चाहिने जति हर्मोन निकाल्न सक्दैन र शरीरको काममा बाधा पर्छ।
अर्को ‘हाइपर थाइरोइडिज्म’ ( थाइरोइड हम्रोन बढी) यस अवस्थामा थाइरोइड ग्रन्थीले अत्याधिक हर्मोन उत्पादन गर्छ र शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी हर्मोन उत्पादन गर्छ।
यदि थाइराइडको हर्मोन कम भएमा तौल बढ्ने, डिप्रेसन हुने, अत्यधिक थकान महशुस हुने, कपाल झर्ने, छाला सुख्खा हुने, महिनावारीको गडबडी, गर्भ नरहनु वा बाझोपन लगायतका लक्षण देखिन्छ। त्यसैगरी, थाइराइडको हर्मोन बढी भएमा तौल घट्ने, असामान्य रूपमा पसिना आउने, अत्यधिक दिसा लाग्ने, घाँटीमा घाउ हुने वा सुख्खा हुने, मुटुको चाल बढ्ने, हातको पन्जा तथा पैतालमा पोल्ने र अत्यधिक पसिना आउने आदि समस्या देखापर्ने डा. कार्कीले बताए।
थाइराइडसम्बन्धी समस्या कसरी पत्ता लाग्छ?
थाइराइड वंशाणुगत समस्या हो। यससँगै थाइराइड ग्रन्थीलाई असर गर्ने औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि थाइराइडको समस्या निम्तिन्छ। तर, यो पत्ता लगाउन रक्त परीक्षण गर्नुपर्ने डा. कार्कीले सुझाए।
थाइराइड हर्मोनको कमी हुँदा उपचार नगरे के हुन्छ?
थाइराइड हर्मोनको कमी भएर उपचार नगरेमा कलेजोमा असर पर्छ। यो हर्मोनको कमी हुनासाथ कलेजोमा नराम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्र बढ्न थाल्ने उनले बताए।
यससँगै, पाचन प्रणालीमा असर गरेर कब्जियत हुने र आन्द्राको चालमा पनि कमी आउँछ।
थाइराइड हर्मोनको कमीले प्रजनन् प्रणालीमा समेत असर गर्छ। यतिमात्रै नभएर बाझोपन, महिनावारी गडबडी, गर्भवती महिलाको हकमा शिशुको शारीरिक र मानसिक विकास नहुने जस्ता जटिल समस्या निम्तिने डा. कार्कीले जानकारी दिए।
थाइराइड हर्मोन कमी हुनु शरीरका लागि निकै घातक हुन्छ। किनकी यसले मुटुमा समेत समस्या निम्त्याउँछ। मुटुको चाल कम हुने, रक्तचाप घटबढ हुने पनि थाइराइड हर्मोन कमीको कारण हुनसक्छ।
मस्तिष्कमा समस्या देखिनु पनि थाइराइड हर्मोनको कमी एक कारण रहेको डा. कार्कीले बताए।
उनले थाइराइड हर्मोनको कमीले डिप्रेसन, एकाग्रतामा कमी, कुनै कुरामा पनि चाख नहुन जस्ता समस्या देखापर्ने बताए। साथै यो हर्मोनको कमीले मिर्गौलाका कार्यमा समस्या आउँछ, शरीरमा पानीको मात्रा बढ्छ र खुट्टा वा शरीर सुनिन्छ।
यो समस्यामा खानपिनले खासै असर नगर्ने डा. कार्कीले दोहोर्‍याए। स्वस्थ खानाले सबैलाई तन्दुरुस्त बनाउन सघाउने उनको भनाइ छ। स्वस्थ शरीर भन्नाले पालिस गरिएका चामल, आँटा नखाने फलफूल नियमित सेवन गर्ने, सागपात र हरियो तरकारी सेवन गर्नुपर्छ।
अझै माछामा आयोडिन पनि हुने हुँदा माछा सेवन गर्दा आयोडिनको कमीले हुने थाइरोइडको समस्यालाई कम गर्छ। शुद्ध खाने तेल (तोरी, भटमास वा सूर्यमुखी)को प्रयोग गर्न पनि आवश्यक हुन्छ।
यससँगै आफ्नो उपचारको लागि सम्बन्धित चिकित्सकबाट मद्दत लिनुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ।
के कारण हुन्छ थाइराइड
थाइराइड शल्यचिकित्सकद्वारा थाइराइड ग्रन्थी निकालिएको अवस्थामा हुन्छ।
आयोडिनको कमी भएको अवस्थामा पनि थाइराइड हुने गर्छ। डा. कार्कीकाअनुसार शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली अनावश्यक रूपमा सक्रिय भई थाइराइड ग्रन्थीको सुजन भएमा थाइराइड हुन्छ।
पिट्युटरी ग्रन्थीमा समस्या भएर थाइराइड ग्रन्थीलाई काम गर्न सघाउने हर्मोन कम भएमा थाइराइडको समस्या आउँछ। विकिरणको प्रभावस्वरूप थाइराइड ग्रन्थीमा हानी पुग्नाले थाइराइड हुन्छ। जन्मजातरूपमै थाइराइडको हर्मोन कम हुनाले पनि थाइराइड हुने डा. कार्कीले बताए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २३, २०७६, ०३:४६:००
हाम्रो डक्टर एप्समार्फत निःशुल्क कोरोना सम्बन्धी परामर्श पाइने
कोरोना केही होइन भनेर लापरवाही नगरौंः डाक्टर लासिवा (भिडिओ)
विराटनगरको नोबेल अस्पतालले अब कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहमति
नोबेलले मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ र ६ का जनताको ७५० रुपैयाँमै पिसिआर परीक्षण गर्ने
नोबेलमा सुरू भयो बाँझोपनको उपचार र कृत्रिम गर्भाधान सेवा